Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အခြေပြုအချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင် ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ တံတားဦးစီးဌာန၏ …
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အသစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်….
First and foremost, I wish you all physical and mental wellbeing. I would like to welcome you all to today’s significant event co – organized by the ADB GMS- EOC and MOECAF. I would like to express my appreciation to ADB, GMS – EOC for
အဓိကအချက်များ အကျဉ်းချုပ်(Summary Highlights)
အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုမျာ…
The Consultation aims to 1) scope ABS-relevant policies on ABS in Myanmar; 2) draft road map towards developing national ABS legal framework; and 3) identify capacity needs of key…..